March | 2009 | Mg Ogga's Notes
ဖူး! စာမေးပွဲဖြေပြီးသွားပြီ အလုံးကြီးတစ်ခု ကျသွားသလိုပဲ ကျောင်းကလည်းပုံမှန်မတက်တော့အတော်ကျက်ယူရတယ် အတန်းထဲက သူငယ်ချင်တွေကျေးဇူးကြောင့် တော်တော်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ လက်ချာတွေကို အသံသွင်းပေးထားတဲ့ ကိုစိုင်နေ၀င်းမြင့်၊လက်ချာတွေကို စာစီပြီး email နဲ့ပိုပေးတဲ့ အစ်မကြီးမမေဦး၊ စာတူတူကျက်တဲ့ ဂျပု၊ပဲလှော်၊လုံးလုံး၊ဇေယျာ၊ဖူးဖူးတို.နဲ.အသုံးချစိတ်ပညာမှကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံး ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကျေးဇူးပါ။
March 25, 2009 in သတင်း.
အမှန်တရားကို တကယ် အလိုရှိပြီး အမှန်တရားကို ရှာဖွေ ဆည်းပူးနေကြသော သူတော် ကောင်းများကို တွေ့ဘူးပါတယ်တဲ့..။ နှစ်တွေလတွေ ကြာသော် လည်း စစ်မှန်သော လွတ်မြောက် မှုကို မရပဲ မဂ္ဂင် အတု ကို မဂ္ဂင် အစစ် ထင် ကာ ကိုယ် ထင် ရာ ပုံဖော်ပြီး အစွဲ ဝင် ကာ ပျော်ရွှင် ကြတာ ကို လည်းတွေ့ ဘူးပါတယ် တဲ့..။အမှန်ကို မသိသေးသမျှ အမှားပေါ်မှာ ပင် အမှန်ထင်ကာ ပျော်ရွှင်တတ်သော ကြောင့် ဘယ် သူ့ကို မှ အပြစ်တင် ပြောဆိုနေစရာ မလိုပါဘူး၊ ကိုယ် တိုင်သာ မှန် သထက် မှန်အောင် ကြိုးစားဘို့…
March 20, 2009 in ဘာသာရေးရာ.
(၁) ငါဟာ ငါ့ဘ၀မှာ အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ငါ့မိသားစုဘ၀မှာလည်း အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ငါ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလည်း အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့ အရေးပါတာလဲ။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား လုပ်ပေးနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေကို ငါ ပြောနိုင်တယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့အကူအညီ ပေးနိုင်တယ်။ ငါ့ကြောင့် နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းသာမှု ရစေချင်တယ်။ ငါ့ဘ၀မှာ ငါဟာ အရေးအပါဆုံးလူ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူက ငါ့ဘ၀မှာ အရေးအပါဆုံး ဖြစ်မလဲ။ ငါဟာ ဘာမှ အသုံးမကျတဲ့သူလို့ ငါ့ကိုယ်ငါ သဘောထားရင် ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ချမ်းသာမလဲ။ ဘယ်လိုလုပ် စိတ်အားတက်မလဲ။ (၂) ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးမိအောင် သတိထားတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဒုက္ခပေးနေကြရင် ဒီလောက်လူတွေများတဲ့ လောကကြီးမှာ ဘယ်နေလို့ ဖြစ်တော့မလဲ။…
March 11, 2009 in ဆောင်းပါး.